Desulphurization Skid Factory | China Desulphurization Skid Manufacturers, mpamatsy
Rafitra fanadiovana entona voajanahary molekiola sivana desu ...
Rongteng famokarana hydrogène misy entona voajanahary na hyd...
Namboarina 500KW hatramin'ny 8MW mpamokatra entona voajanahary sy ga...
Ozinina famokarana hydrogène entona voajanahary
Famokarana hidrôzenina manokana miaraka amin'ny entona voajanahary
2 Megawatt, 1000KW mpamokatra entona voajanahary
250KW hatramin'ny 8MW mpamokatra entona voajanahary
Fanalana rano vita amin'ny entona voajanahary nataon'i TEG De...
Ny fikorianan'ny kristaly evaporation
TEG dehydration skid ho an'ny fanadiovana entona voajanahary
MDEA fomba decarburization skid ho an'ny entona voajanahary con...
Pigging transmitter sy récepteur skid ho an'ny entona solika ...
Separator menaka sy entona ho an'ny fitsaboana ny lavadrano
Ny fanerena ny fanerena entona sy ny skid fandrefesana
Desand skid ho an'ny rafitra fanesorana fasika
Rafitra fanadiovana entona voajanahary molecular sieve desulphurization
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiarahamonintsika dia misolo tena ny angovo madio izahay, ka mitombo ihany koa ny fangatahana entona voajanahary ho angovo madio. Na izany aza, eo amin'ny dingan'ny fitrandrahana entona voajanahary, lavadrano entona maro matetika no misy hidrôzenina sulfide, izay hiteraka harafesina amin'ny fitaovana sy fantsona, mandoto ny tontolo iainana ary mampidi-doza ny fahasalaman'ny olombelona. Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ny fampiasana be dia be ny teknolojia desulfurization entona voajanahary dia namaha ireo olana ireo, fa miaraka amin'izay koa, nitombo ny vidin'ny fanadiovana sy ny fitsaboana entona voajanahary.
Unity fanadiovana entona sulfida hydrogène
Fampidirana Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina misy antsika dia misolo tena ny angovo madio izahay, noho izany dia mitombo ihany koa ny fangatahana entona voajanahary ho angovo madio. Na izany aza, eo amin'ny dingan'ny fitrandrahana entona voajanahary, lavadrano entona maro matetika no misy hidrôzenina sulfide, izay hiteraka harafesina amin'ny fitaovana sy fantsona, mandoto ny tontolo iainana ary mampidi-doza ny fahasalaman'ny olombelona. Miaraka amin'ny fampivoarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fampiasana be dia be ny teknolojia desulfurization entona voajanahary dia namaha ireo olana ireo, fa miaraka amin'izay koa t...
Molecular sieve desulphurization (desulfurization) skid, antsoina koa hoe molecular sieve sweeting skid, dia fitaovana manan-danja amin'ny fanadiovana entona voajanahary na fanodinana entona voajanahary. Ny sivana molekiola dia kristaly aluminosilicate metaly alkali miaraka amin'ny firafitry ny rafitra sy ny rafitra microporous fanamiana.
Skid mamy entona voajanahary
MDEA desulfurization entona voajanahary (desulfurization) skid, antsoina koa hoe MDEA sweeting skid sy ny entona desulfurization unit, dia fitaovana lehibe amin'ny fanadiovana entona voajanahary na ny entona voajanahary.
Ny fitaovana fanamafisam-peo entona voajanahary
Molecular sieve voajanahary fitaovana mamy (desulfurization) skid, antsoina koa hoe molecular sieve sulfide fanesorana amin'ny entona voajanahary, dia fitaovana lehibe amin'ny H2S fanesorana amin'ny entona voajanahary sy ny fitsaboana entona voajanahary.
MDEA desulphurization skid ho an'ny fitsaboana entona voajanahary
MDEA desulphurization (desulfurization) skid, antsoina koa hoe MDEA sweeting skid, dia fitaovana manan-danja amin'ny fanadiovana entona voajanahary na fanodinana entona voajanahary.